"Waad Iga Oohisay, Raali Ahow Mustafi" - Taageerayaasha Arsenal Oo Raaligeliyay Skhodran Mustafi Ka Dib Wareysigii Qiirada Lahaa Ee Uu Bixiyay | Laacib.net
“Waad Iga Oohisay, Raali Ahow Mustafi” – Taageerayaasha Arsenal Oo Raaligeliyay Skhodran Mustafi Ka Dib Wareysigii Qiirada Lahaa Ee Uu Bixiyay
October 9, 2019 Balaleti Comments Off on “Waad Iga Oohisay, Raali Ahow Mustafi” – Taageerayaasha Arsenal Oo Raaligeliyay Skhodran Mustafi Ka Dib Wareysigii Qiirada Lahaa Ee Uu Bixiyay
Shkodran Mustafi ayaa bixiyay wareysi qiiro leh oo uu kaga hadlayo sida ay u la dhaqmeen taageerayaasha Arsenal.
Inta badan taageerayaasha kooxda Gunners ayaa baraha bulshada maanta ku soo qoray inay ka qoomameynayaan hadaladii xumaanta ahee ee ay ku yiraahdeen daafaca Jarmalka kaasoo si furan uga hadlay dhibaatada uu ku qabo taageerayaasha.
“Labadii sannadood ee uu horeysay ee markii aan u soo wareegay Arsenal, wax walba waxa ay ahaayeen sida igu fiican. Waxaan isku arkayay xiddig si fiican u ciyaaraya” ayuu Mustafi u sheegay Der Speigel. “Laakiin dhamaadkii sannadkii 2018 waxaa i soo gaaray dhaawac, waxaan sameeyay qaladaad qaar, waxaana wajahay wax aan waligeey khibrad u yeelanin.
“Seddex isbuuc ayaan dhaawac ku maqnaa, waxaana la igu soo bilaabay kulankii Liverpool ee December 2018 anigoon tababar sameynin sababtoo ah tababaraha ayaa ii baahnaa. Waqtiga nasashada ciyaarta waxa ay aheyd 1-4. Si fiican uma aanan dheelin, dhaawac kale ayaana i soo gaaray.
“Wiixii markaas ka danbeeyay, taageerayaasha Arsenal ayaa fariimo xun iigu soo qorayay Instagram iyo Twitter, waxaana la iga qoray maqaalo la igu dhaleeceynayo. Aniga ayaa nafteyda eedeeya waana ogaa inaan qaladaad sameeyay kulankii Liverpool. Sidoo kalena waan aqbali karaa eedeymaha la ii soo jeediyo.
“Laakiin eedeymaha waxa ay noqdeen kuwa xad dhaaf ah. Waxaan noqday bartilmaameed. Waxaan gaaray in xitaa la igu eedeeyo guuldarrada ciyaar aanan dheelin.”
Waxa uu hadalkiisa raaciyay: “Waxaa jiray maalmo aan nafteyda shaki gelinayay. Laakiin waxaan ogaaday inaan maskax ahaan xooganahay.
“Hadal ay xaaskeyga igu tiri ayaa wax badan i caawiyay: ‘Haddii aad u xun tahay sida ay dadku kaa dhigayaan, ma aadan noqoteen mid ku guuleysta Koob Adduun ama mid u ciyaara Arsenal, waxbaa heerkaan ku soo gaarsiiyay.’ Tan iyo markaas waxaan awood u yeeshay inaan xamilo eedeymaha.”
Ka dib wareysigaan taageerayaasha Arsenal ayaa raaligelin u diray daafaca Jarmalka iyagoo ka qoomameeyay dhaawaca ay u geysteen xiddigooda.
Taageere ayaa soo qoray: “Waxay tani iga dhigtay mid ooya, raali ahow Mustafi”
Mid kale ayaa soo qoray: “Waan murugooday intii aan akhrinayay wareysiga. Raali ahow Mustafi”
Taageere kale ayaa yiri: “Mar kale ka raali ahow aflagaadada aan aniga iyo taageerayaal badan oo Arsenal ah oo dunida dacaladeeda ku nool ku geysanay ka dib markii aan akhriyay wareysigaaga waxaan ogaaday in si khalad ah laguu fahmay, waxaadna tahay bani aadam, waxaadna leedahay qoys. Raali ahow Mustafi.”
Taageere kale aya a soo qoray: “Mustafi waan ku raaligelineynaa. Qaar ka mid ah taageerayaasha Arsenal sida aniga oo kale waligeey hal maalin kuma dhaleeceynin. Waxaan ciyaaraa kubada inkastoo aan xirfadle aheyn. Waan fahamsanahay in qaab ciyaareedka uu hoos u dhici karo. Waad ku mahadsan tahay inaad sii joogtay oo aad aamusisay iyaga.”
Shivam Chada ayaa isna soo qoray: “Waxaani waa sharaf dhac. Taageerayaasha waa inay dareemaan ceeb. Waxba kuma jabna eedeynta laakiin aflagaadada loo geystay ninkaan waa doqonimo. Inuu ciyaaryahan yahay lama micno ah inuusan bani aadam aheyn. Mana jirto bani aadam u qalma falagaado sidaan u xun.”
"Waxaa La Igu Eedeeyay Guuldarada Ciyaar Aanan Dheelin" - Xiddig Arsenal Ah Oo Qaati Ka Taagan Eedeymaha Taageerayaasha